Turbine Francis kwụ ọtọ maka ọdụ ụgbọ mmiri dị ọkara na nnukwu ikike, China vetikal Francis Turbine maka ndị na-emepụta ọdụ ụgbọ mmiri dị ọkara na nnukwu ikike, ndị na-ebubata, ụlọ ọrụ - HNAC Technology Co., Ltd.
>lọ>Onye na-eweta ngwaahịa>Ngwa igwe na igwe eletrik zuru oke>Hydraulic tobaim
Turbine hydraulic bụ igwe na-eme ka ike nke mmiri na-asọba ghọọ ike igwe na-atụgharị. Ụgbọ mmiri Francis nwere ike ịrụ ọrụ n'ogo isi mmiri nke 20-700 mita. Ike mmepụta sitere na ọtụtụ kilowatts ruo 800MW. Ọ nwere oke ngwa ngwa, arụ ọrụ kwụsiri ike na arụmọrụ dị elu.
A na-ekewa turbines Francis ụzọ abụọ: Francis kwụ ọtọ na Francis kwụ ọtọ.
Turbines Francis kwụ ọtọ nwere arụmọrụ dị elu karịa turbines kwụ ọtọ, nke nwere nkwụsi ike arụmọrụ ka mma. Maka nnukwu turbines, ịma jijiji na-emetụta nkwụsi ike nke ọrụ, ebe turbines kwụ ọtọ nwere nkwụsi ike ka mma.
HNAC na-ebunye turbine Francis kwụ ọtọ ruo 150MW kwa nkeji, nke a na-ejikarị na igwe ọkụ na-agbakọ na oke ibu.
Nhazi nke onwe onye na teknụzụ ọgbara ọhụrụ na-enye arụmọrụ kachasị elu, ogologo ndụ ogologo yana na-echekwa uru pụrụ iche.